Virus alert! ဆိုပြီးပြနေလို့ — MYSTERY ZILLION
Virus alert! ဆိုပြီးပြနေလို့
ကျွန်တော့်ရဲ့စက်ကWindow 2000 advanced server တင်ထားတာပါ။ date & time ဘေးနားမှာ VIRUS ALERT! ဆိုပြီးပြနေပါတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကူညီပါဦးဗျာ။
အဲဒါ Spyware လိုလို၊ Adware လိုကောင်ပါဗျာ ဘာမှမဟုတ်ဘဲ စိတ်ညစ်အောင် လျှောက်လုပ်တာပါ.. (အမြင်အရကို ပြောတာနော်) နောက်ကွယ်က ဘာတွေလုပ်နေလဲတော့ မသိဘူး... ကျွန်တော်ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း Manual ပဲ ရှင်းလိုက်ပါတယ်။ အဲနည်းပြောရင်တော့ တော်တော်လေးရှည်လိမ့်မယ်.. ကျနော့် blog မှာတော့ရေးထားတာရှိတယ်... Specific တော့ဟုတ်ဘူး... General အနေနဲ့ပါ.. ဖတ်ချင်ရင်တော့... ဒီမှာပါ...
ဒီကလူတွေက Anti-Virus, Anti-Spyware Program အကြောင်းတော်တော်သိကြတယ်ဗျ.. သူတို့ဝင်ရေးကြပါလိမ့်မယ်... ခုတော့ မမြင်ကြသေးလို့နေမှာပါ.....
ကိုမင်းသီဟအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် C:\_WINDOWS အောက်က ဖိုင်တွေကို (ဖိုလ်ဒါမပါပါ) Screen Shot ပို့ပေးပါလားဗျာ။ ကျွန်တော်ပြောတာရှုပ်နေမှာစိုးလို့ နည်းနည်းလေးရှင်းပြပါရစေ။ ဖိုင်တွေဆိုတာ .exe, .dll, .bmp, .ini,etc....စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်။ အဲဒါလေးတွေကို Screen Shot (သို့) ဘာဖိုင်တွေရှိလဲရိုက်ပြီးပြပါလားဗျ။